ဝိမုတ္တိသုခ (The Bliss Of Emancipation): အမှန်မြင်ရေး၊ ဦးစားပေး (သို့ ) ဒီလိုလေး လုပ်ကြည့်ရင် ကောင်းမလား? (ပြန်လည် ဝေဖန်ဆွေးနွေးမှု ၁၀)
အမှန်မြင်ရေး၊ ဦးစားပေး (သို့ ) ဒီလိုလေး လုပ်ကြည့်ရင် ကောင်းမလား? (ပြန်လည် ဝေဖန်ဆွေးနွေးမှု ၁၀)
အစ်မ မသစ္စာအလင်း (http://www.thitsaralin.com) ၏ ပြန်လည်ဝေဖန်ဆွေးနွေးမှု
Response to the article mentioned in MMWAI, www.mmwaiindia.com
ရခဲလှတဲ့လူ့ဘဝမှာ ဘုရားသာသနာတော်နဲ့ ကြုံကြိုက်ပြီး သာသနာတော်တွင်းသား ဖြစ်ကြရတယ် ဆိုတာ အလွန်အင်မတန် ကံကောင်းကြလို့ပါ။ ဘုရားသာသနာတော်က ပေးတဲ့ ချမ်းသာ အစစ်အမှန်နဲ့ လောကီချမ်းသာ ဆိုတာ ပြည်တန်ပတ္တမြားနဲ့ မြက်ခင်းလို နှိုင်းယှဉ်ရမှာပါ။ မောဟများတဲ့ သားသမင်ဟာ ပတ္တမြားကို မချဉ်းကပ်ပဲ မြက်ကိုစားပြီး ပြန်သွားသလို မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့ သာသနာတော်နဲ့ မထိုက်တန်သူ တွေဟာလည်း မြက်စားပြီး လူ့ဘဝထဲက ပြန်ထွက်သွားကြတော့တာပေါ့။ ဉာဏ်အလင်းရှိတဲ့ လူတွေကတော့ ပတ္တမြားကို ကောက်ယူသိမ်းပိုက် ကြပါလိမ့်မယ်။
ပတ္တမြားကို အဘိုးထိုက်တန်မှန်း၊ အမြင်မှန်ကန်ရေး၊ ကောက်ယူ သိမ်းပိုက်နိုင်ကြရေး၊ မြတ်ဗုဒ္ဓ ပွင့်မှသာ ရရှိနိုင်တဲ့ ပညာတွေကို သင်ကြားပေးနေတဲ့ ပရိယတ္တိ သာသနာတော်ကို သန့်စင်မြင့်မြတ်မှုနဲ့ အတူ သန့်စင်သထက်သာ ပိုသန့်စင်စေချင်ပါတယ်။ မြင့်မြတ်တဲ့ ရပ်တည်မှုနဲ့သာ ပိုပြီးမြင့်မြတ်စွာ ရပ်တည်စေချင် ပါတယ်။
စာရေးဆရာကြီးဦးဆန်းလွင် (အရှင်အာဒိစ္စရံသီ) ဟောတဲ့ တရားတော် တစ်ပုဒ်ထဲမှာ မှတ်မိနေတဲ့ ဇာတ်လမ်းလေး တစ်ခုရှိပါတယ်။ အဲဒီမှာ ဇာတ်လိုက် ဘုန်းဘုန်းကတော့ မောင်လေး Bliss ခွဲခြားဖေါ်ပြတဲ့ ရဟန်းတော် လေးမျိုး လေးစားထဲမှာ မပါပါဘူး။
စိန်တွေ အများကြီး ပိုင်ဆိုင်တဲ့ မုဆိုးမ တစ်ယောက်အိမ်ကို ဆွမ်းခံကြွရင်း အဲဒီ မိနုးမက ခြောက်လုံးပြူးနဲ့ တေ့ပြီး သူ့ကို လက်ထပ်ခိုင်းလို့ မလွှဲမရှောင်သာ လက်ထပ်လိုက်ရတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ လက်ထပ်ပြီးတဲ့နောက် မကြာခင်မှာ အဲဒီ မိန်းမဟာ၊ ဆုံးပါးသွားလို့ ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ စိန်တွေဟာ ပြည်တောင်းတခု စာမက ရှိနေလေတော့၊ အကယ်ဒမီ ရုပ်ရှင်မင်းသမီး တစ်ယောက် ကို လက်ထပ် ယူခဲ့တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ (သူ့ကိုတော့ ဘယ်သူမှ look down လုပ်ကြမယ် မထင်ပါဘူးနော်)။
ဆရာတော် ပြောချင်တာကတော့ သတ္တဝါတွေမှာ ဘဝ အခြေအနေကို ထိန်းကျောင်းနေတဲ့ နောက်ခံ ကံအကြောင်း တရားတွေ ရှိတတ်ကြတယ် ဆိုတာပါပဲ။
ကုသိုလ် ဆိုတာက အရံသင့် စားဘို့ ချက်ပြုတ်ထားတဲ့ ထမင်း၊ ဟင်းတွေနဲ့ တူပါတယ်။ လောကီ ရေးရာ အတတ်ပညာတွေ ကတော့ ထမင်းပွဲပြင်တဲ့ ပညာနဲ့ တူပါတယ်တဲ့။ ထမင်းပွဲကို ဘယ်လောက်ပဲ လှအောင် ပအောင် ပြင်တတ် ဆင်တတ်ပေမဲ့၊ ချက်ထားတဲ့ ထမင်း၊ ဟင်း မရှိရင် ငုတ်တုတ် ထိုင်နေရုံသာ ရှိပါတော့တယ်လို့ ကျေးဇူးတော်ရှင် ပိုင်းလော့ ဆရာတော် ဘုရားကြီးကလည်း ဆုံးမဖူးပါတယ်။
ဒါဆို အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း ပညာကို ပစ်ပယ်ရတော့ မလား ဒီလိုတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ လူတို့ရဲ့ ဓာတ်ခံ ပါရမီ အနုအရင့်အရ လိုအပ်နေအုံးမှာပါ။ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း ပညာကို အမြင့်ဆုံး တတ်ကျွမ်းခဲ့ တာတောင်မှပဲ ကုသိုလ်ဆိုတဲ့ ဝမ်းစာ မပြည့်ရင် အဆင်ပြေမနေပါဘူး။ ခုနက အတတ်ပညာရှင်၊ ဘွဲ့တွေအများကြီး ရတဲ့မိန်းမဟာ ကျေးဇူးတော်ရှင် မြတ်စွာဘုရား ညွှန်ကြားတဲ့ ကုသိုလ်ပါရမီ အလုပ်တွေကို အားနဲ့အင်နဲ့ အချိန်ပေး ဖြည့်ဆည်းလိုက်မှ အဆင်ပြေသွားခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်မ ပြောချင်တာက အဓိကနဲ့ သာမညကို ခွဲခြား ပြချင်တာ တစ်ခုပါပဲ။ အသက်မွေးမှု အတတ်ပညာတွေ ဆိုတာကတော့ သမုတိသစ္စာ နယ်မှာပဲ ရှိနေပါတယ်။
ပရဘုန်းဘုန်း (ပရဟိတ လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ကြသော ရဟန်းတော်များ) အတွက် ကလည်း သူတို့ရဲ့ ထက်သန်တဲ့ စေတနာ စိတ်စွမ်းအင်၊ ဘုန်းကံပါရမီ ကုသိုလ် အရှိန်အဟုန် ဆိုတဲ့ အဓိက အင်အားသာ ပြည့်စုံနေမယ်ဆိုရင် အတတ်ပညာ ပိုင်းဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်သူတွေ၊ Donor တွေဟာ အရံ-သာမည အင်အားလို သူ့ထက်ငါ ဦးအောင် ကူညီချင်တဲ့ လူတွေ တန်းစီနေမှာပါ။
ကျွန်မတို့ ဗုဒ္ဓ ဘာသာဝင်တို့ရဲ့ အဓိက ရည်မှန်းချက် ပန်းတိုင် ကတော့ နိဗ္ဗာန်ပါပဲ။ ရဟန်းတော် များရမယ့် နိဗ္ဗာန်နဲ့ လူဝတ်ကြောင်တို့ ရမယ့် နိဗ္ဗာန်က ကွဲပြားနေတာ မဟုတ်ပါဘူး၊ အတူတူပါပဲ။ သီလ အထူးစင်ကြယ်တဲ့ ရဟန်းဘဝ ဖြစ်လေတော့ မြင်းစီး သွားရသလို သက်သာ လျှင်မြန်တဲ့ အကျိုးရှိပါတယ်။ လူတွေကတော့ လမ်းလျှောက် သွားနေသလို ပါပဲ၊ ရောက်ဘို့ရာ ခက်ခဲမှာပါ။ လောကီအာရုံ အမျိုးမျိုးနဲ့ တာဝန်ဝတ္တရား တွေကြောင့် နှောင့်နှေး ကြန့်ကြာတတ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့လည်း ဝိနည်း စည်းကမ်း ချွတ်ချော်လို့ တိမ်းစောင်းသွားခဲ့ရင် ဒုန်းစိုင်းသွားတဲ့ မြင်းပေါ်က ကျသလို အကျနာမှာကတော့ ရဟန်း ဘဝပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဘယ်ဘဝမှာ ရောက်နေနေ ငါ ဘယ်လမ်းလျှောက်နေ သလဲဆိုတာ စမ်းစစ်နေဘို့သာ အရေးကြီးလှ ပါတယ်။ ရဟန်းဘဝမှာ ကုသိုလ် ဖြစ်အောင် မနေနိုင်လို့ ကတော့ အစုန်လမ်းကို ဆင်းဘို့က လူ့ဘဝထက် ရာနှုန်း ပိုများနေပါတယ်။
အမှန်အားဖြင့် အရိယသစ္စာ အရ တကယ်တန်း စစ်မှန်သော ချမ်းသာဆိုတာ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ပစ္စည်းဝတ္ထုများမှာ မူမတည်ပါ။ မှန်ကန်သော နှလုံးသွင်းမှုနှင့် မှန်ကန်သော အသိ၊ မှန်ကန်သော သစ္စာ၊ မှန်ကန်သော အမြင်မှာသာ တည်ပါတယ်။ ကျွန်မတို့ဟာ မှန်ကန်သော ချမ်းသာကို ရလိုပါလျှင်၊ မှန်ကန်သော အသိ၊ မှန်ကန်သော သစ္စာ မှန်ကန်သော အမြင် ရအောင် ကြိုးစားအပ်လှ ပါတယ်။
ကျွန်မတို့ရဲ့ နိုင်ငံမှာ ကြီးမားတဲ့ တိုက်ကြီးတွေ၊ ကြီးမားတဲ့ ယာဉ်ရထားတွေ၊ တန်ဘိုးကြီးမားလှတဲ့ အဝတ်အထည်၊ စားသောက်ကုန်တွေ၊ အလှကုန်တွေ ရှိမနေပေမဲ့ မြတ်စွာဘုရားရဲ့ အဆုံးအမတော်အတိုင်း ဟန်ဆောင်မှုတွေ မပါဘဲ တကယ်တမ်း မတုန်မလှုပ် ခိုင်မာတဲ့ ယုံကြည်ချက်ဖြင့် တစ်ဦိးချင်းရဲ့စရိုက်၊ ဉာဉ် အဆင့်ကနေပြီး အမျိုးသားစရိုက်၊ အမျိုးသားဉာဉ် အဆင့်သို့ ရောက်အောင်
-ဉာဏအားနဲ့ တတ်နိုင်တဲ့ဘက်က ဉာဏအားဖြင့် လည်းကောင်း၊
(ဘယ်လိုနည်းနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ် ရဟန်းဘဝ ရောက်ရှိနေကြတဲ့ သံဃာတော် အရှင်သူမြတ်တို့ကို မိမိထက် ဘုန်းကံ၊ပါရမီ ကြီးမားသူများ အဖြစ်၊ သံဃာရတနာ တစ်ပါးကို ဆည်းကပ်ခွင့် ရသော အကြောင်းတရား အဖြစ်ဖြင့် ဤဆောင်းပါးကို ရေးသားရင်း ရိုသေစွာ ရှိခိုးဦးညွှတ်၊ ကန်တော့ လိုက်ပါရစေ-- အရှင်သူ မြတ်တို့ဘုရား။)
Posted by The Bliss Of Emancipation at 5:29 AM